किन केटाहरु कन्डम प्रयोग गर्न मान्दैनन् ? यस्तो छ कारण » RealPati.com
किन केटाहरु कन्डम प्रयोग गर्न मान्दैनन् ? यस्तो छ कारण
सन् २००२ देखि २०१० सम्ममा आफ्नो पहिलो यौन सम्पर्कको समयमा करिब ८० प्रतिशत युवाले कन्डमको प्रयोग गर्ने बताएका थिए। तर हालै गरिएको अध्ययनले सो संख्या घटेको देखाएको छ।
उनले युवामा भएको अश्लिल चलचित्र हेर्ने बानीका कारण पनि कन्डमको प्रयोग घटेको हो। उनले भनिन् ‘अहिले धेरै युवाहरुले अश्लिल चलचित्र हेरेर यौन जीवनका बारेमा जानकारी लिन्छन्, उनीहरुले त्यहाँ यौन सम्पर्कको समयमा कन्डमको प्रयोग भएको देख्दैनन् र परिणाम स्वरुप उनीहरु पनि कन्डम प्रयोग गर्न रुचाउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘म सधै युवाले कन्डमको प्रयोग गरोस् भन्ने चहान्न तर आफ्नो पार्टनरभन्दा दोस्रो महिलासँग यौन सम्पर्क राख्ने हो भने कन्डमको प्रयोग गर्नु अत्यन्त जरुरी छ।एजेन्सी
१० तस्वीरमा हेर्नुहोस् शंखधर शाख्वा जयन्ती
निर्वाचनमा सबै जिल्लामा फरक-फरक मतपत्र हुने
कांग्रेस महाधिवेशन : काठमाडौंसहित ७ जिल्लामा मंगलबार वडा अधिवेशन सम्पन्न
के छ यो तस्वीरमा? जसले डिभोर्स गरायो
सत्ता गठबन्धनको कार्यदलको बैठक बस्दै